Nakaton’i Torkia indray ny fidirana ao amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2019 8:14 GMT
Nakaton'ny fitsarana Tiorka iray indray ny fidirana amin'ny tranonkala malaza fizarana horonantsary, YouTube, noho ny lahatsary iray voalaza fa manevateva ny ray mpanorina ny firenena, Kemal Atatürk.
Araka ny nambaran'ny The New Anatolian, nahazo hafatra manazava ny fandraràna ireo mpiserasera Tiorka niezaka niditra Youtube : “Naato ny fidirana ao amin'ny tranonkala www.youtube.com araka ny fanapahan-kevitra 2008/55 T.R. Ankara noraisin'ny Fitsarana Heloka bevava ho an'ny Fandriampahalemana faha-12.”
Fanintelony izao no nakatona ny Youtube tao Torkia taorian'ny fanapahan-kevitr'izany fitsaràna izany ihany izay milaza fa manevateva ny rain'i Torkia maoderina, Kemal Atatürk ireo horonantsary mipoitra ao amin'ny tranonkala.
Tamin'ny 17 aogositra 2007, nakaton'ny Fitsarana Sivily Faharoa Fatih Tiorka ao amin'ny ambaratonga Voalohany ny fidirana ao amin'ny sehatra wordpress.com manontolo taorian'ny filazana fa fanalam-baraka ny mpamorona ny Tiorka islamika, Adnan Oktar, aka Harun Yahya..
Manasa anao izahay hijery ny Access Denied Map sy ahafantatra bebe kokoa momba ny sivana amin'ireo tranonkala web 2.0 malaza manerantany.